Waa maxay Caqabadaha ka hortaagan Kylian M’Bappe in uu ku biiro PSG? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Waa maxay Caqabadaha ka hortaagan Kylian M’Bappe in uu ku biiro PSG?
(22-8-2017) Cayaaryahanka kooxda kubada Cagta Monaco ee Kylian M’Bappe ayaa weli waxaa u suurta geli la.in uu ku biiro kooxda PSG oo dhawaan lasheegay in ay lagaartay heshiis kama damabays isaga oo hada dibad joog ka ah kooxdiisa markii uu ladagaalay Cayaartoy ay isku Naadi yihiin.
Kylian M’Bappe oo sidoo kale bartilmaameed u ahaa kooxda Real Madrid ayaa lasheegayaa in Naadiga PSG ay u diyaarisay in ay ku iibsato aduun lacageed gaaraya 140 million balse Waxa ay weydiisteen kooxda Monaco in ay M’Bappe ku siiyaan heshiis amaah ah si ay uga dheeraato Ganaax kaga yimaada Xiriirka UEFA maadaama ay horay u qarasha gareeeyeen lacag aad u badan oo ay ku soo qaateen Neymar.
Wargeyska Gazzetta dello Sport,ayaa daabacay in ay jirto caqabad kale oo hor taagan in Kylian M’Bappe ku biiro kooxda PSG Caqabadaas oo ah booska uu ka dheeli doono maadaama uu Naadiga Joogo Edinson Cavani oo dhanka Weerarka ka cayaaraya kaas oo aan ogolaan doonin in uu Kursiga keydka u fariisto wiilkaan 18 sano jirka ah ee Kylian M’Bappe.
Xiddigaan ayaa lasheegayaa in uu doonayo katagitaanka kooxdiisa Monaco kadib markii ay mushaar aad u badan u balan qaaday kooxda PSG oo lagaartay heshiiska shaqsiga ah.